Koety: Nampijaliana noho ny siokan’olon-kafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2019 4:10 GMT
Nandritra ny taona 2011, nahitana trangana fisamborana mpisera Twitter maro tany Koety. Nanomboka tamin'ny mpandefa sioka roa nosamborina noho ny fanevatevana ny sekta ara-pivavahana izany. Nahitana resaka politika ny tranga hafa satria nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana manohitra ny praiminisitra teo aloha izay voampanga ho nanao kolikoly ireo mpandefa sioka. Nisy mpandefa sioka miisa telo ihany koa no voasambotra ary avy eo noafahana vonjimaika rehefa nandoa onitra noho ny faniratsiràna ny Amir tao Koety niaraka tamin'ny tenirohy #بطاريةة (bateria amin'ny teny Arabo) izay nadika ho fanesoana ny fon'ny Amir mandeha amin'ny bateria.
Tsy nisy ny fisamborana tamin'ireo Bedoon, vondrom-piarahamonina tsy manana zom-pirenena ao Koety izay nolavina antontan-taratasy sy zony fototra maha-olombelona noho ny fampiasana ny tambajotra sosialy; farafaharatsiny tamin'ireo tranga notaterina. Nanao fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny volana Febroary 2011 ny vondrom-piarahamonina ary maro ireo fisamborana sy fitsarana natao tamin'ny mpanao fihetsiketsehana. Na izany aza, ny faran'ny volana Aprily 2012 no nanamarika ny tranga voalohany nahitana Bedoon iray nosamborina noho ny kaonty twitter iray izay noheverin'ny polisy misahana ny fiarovam-panjakana fa nosokafany. Voampanga ho nanokatra kaonty hosoka ho iray amin'ireo minisitra ary naniratsira ny Amir i Khaled Al-Enizi, 24 taona .
Araka ny Mpiaro ny Zon'ny Bedoon, notevatevaina sy norahonana haolana nandritra ny famotopotorana azy i Khaled. Nampiasa ny fomba fampijaliana “fandoroana” izay ahitana ny olona iray tazonina eo ambony afo ny polisy. Naratra mafy ny sandrin'i Khaled ka tsy maintsy nentin'izy ireo tany amin'ny hopitaly izy ary nilazan'ilay dokotera fa tsy maninona izy. Nentina niverina indray izy mba ho hampijaliana. Nampiasa fomba fampijaliana iray hafa antsoina hoe “efitra fampangatsiahana ny maty” ny polisy izay hilazana amin'ilay lasibatra fa natao ho an'ny maty ny vata fampangatsiahana ary avy eo dia hapetraka ao izy mandra-pibaboka.
24 Aogositra 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana